Showing ७१-८० of ११४ items.
मसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेकपाको तर्फबाट धरानको मेयर पदका उम्मेद्वार प्रकास राई धरानलाइर्मे अत्यवश्यक व्यक्ति हुन । ततकालिन मेयर तारा सुब्बाको निधन पछि धरान उपमहानगरपालिकाको विकास र सुशासनका लागि नेकपाले अगाडी सारेका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी एउटा सहि र सक्षम प्रतिनिधि आज नेकपा पार्टीले छानेको छ । मेयर पदका लागी नेकपा भित्र योग्यता क्षमता भएका थुप्रै आकाक्षीहरु रहदा रहदै पनि प्रकास राई छानेको छ । भूमिगत काल देखिनै कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गर्दै आएको एक निष्ठावान इमानदार नेताका रुपमा परिचित प्रकाश एउटान धरानका लागि उज्यालो प्रकाश हो । साविक एमाले र माओवादी केन्द्रले यस अघि जार ि
१,०६१ पटक पढिएको
विजय राई २०४१ सालदेखि नै मोरङको बाहुनीस्थित जनता माविमा पढ्दैंदेखि अनेरास्ववियुको प्राक कमिटीमा काम गरेर सकृय राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति हुन । धरान ८ घर भएका राई अनेरास्ववियू सचिवालय सदस्य, शैक्षिक विभाग प्रमुख हुदैं त्रिभूवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरमा एक कार्यालय स्वावियु सभापतिसमेत भएका थिए । विभिन्न राजनीतिक कमिटी, संघ संस्थाको नेतृत्व गदैं उनले राष्ट्रिय राजनीतिसँग पहुँच राख्ने हैसियत बनाएका छन् । किर्तिपुरबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर(एमविए) सम्म अध्ययन गरेका राई स्थानीय तहमा भएका कुनै पनि समस्या उनी सिधै केन्द्रीय नेताहरुसँग राखेर समाधान खोज्ने उनको खुविले स्थानीय तहमा उनी लोकप्रिय छन्
३,५६० पटक पढिएको
सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकलाई कसरी लिनुहुन्छ ?–यो सुकुम्बासी लक्षित पहिलो विधेयक हो । तर यसमा एउटा बुँदाले सुकुम्बासीलाई अधिकार दिने र अर्को बुँदाले नदिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको तजबिजमा अर्थ लाग्ने शब्दहरू छन् । यो विधेयकले त २०२१ सालपछि जसरी पहुँचवालाले सयौं बिघा जग्गा दर्ता गराए तर पहुँच नहुनेले बास बस्ने ठाउँ पाएनन्, त्यस्तै अवस्था दोहोरिन्छ । त्यसैले यसलाई सच्याउनु पर्छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पास भइसक्यो । अब के गर्नुहुन्छ ?–प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुगेकै बेलादेखि हामीले पुनः संशोधन हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएका थियौं तर राष
१,५३२ पटक पढिएको
काठमाडाैं / नेपाल प्रहरीले अनाधिकृतरुपमा एटिएमबाट पैसा निकाल्ने पाँच चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मध्यरातमा दरबारमार्गस्थित नवील बैंकको एटिएमबाट अनाधिकृतरुपमा पैसा निकाल्दै गर्दा पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले मध्यरातमा नवील बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दै गर्दा पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । “शुरुमा एटिएमबाट पैसा निकाल्दै गर्दा एक जनालाई पक्राउ गरेका थियौँ, उसको सहायतामा थप चार जना दरबारमार्गमा रहेको माया मनोहर होटलबाट पक्राउ गरेका छौँ”, उनले भने । पक्राउ परेकासँग प
१,०८१ पटक पढिएको
इडन एकेडेमी प्रदेश १को नाम चलेको शैक्षिक परामर्श संस्था हो । विदेश अध्ययनका लागि जान चाहदा परामर्शका लागि काठमाडौं जानु पथ्र्यो तर ११ बर्ष अघि धरानबाट इडनले सेवा दिन थाले पछि पूर्वका विद्यार्थीहरु काठमाडौ जानु पर्ने बाध्यता हटेको छ । विद्यार्थीहरुलाइ मध्यनजर गरेर विदेशका सम्बन्धित कलेजका प्रतिनीधि यही बोलाएर इडेनले भदौं ८ र ९ गते धरान र इटहरीमा शैक्षिक मेला आयोजना गदैं छ । मेलाको तयारी र यसको उपयोगिताको बारेमा इडनका संचालक मोहन तिगेलासँग गरिएको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । इडन एकेडेमीले के गरिरहेको छ ? गत बर्षदेखि इडन एकेडेमीले बार्षीक रुपमा गर्दै आइरहेको शैक्षिक मेला गदैं आएक
१,०४५ पटक पढिएको
– तपाई पार्टीको काममा कहिलेदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ र हाल के गर्दै हुनुहुन्छ ? करिब २०३५ सालतिर तत्कालीन कोर्डिनेसन कमिटीमा (कोके) आबद्ध भएँ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा मालेमा आबद्ध भएँ । त्यसपछि माक्सवादीहरूबीचको एकीकरणपछि एमाले र अहिले माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणपछि नेकपामा भएका छौँ । म सानैदेखि पार्टीको सिद्धान्त यो हो भनेर भन्दा पनि अग्रजहरूले राजसंस्थाका तथा तत्कालीन शासकहरूको दमनका बारेमा बताइरहँदा र समाजका दुःखी, गरीबहरूको कुरा सुनिरहँदा तिनीहरूको सेवा गर्न पाए, यिनीहरूको पक्षबाट बोल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने एक प्रकारको उत्सुकता हुन्थ्यो । २०३५ केही साथीहरू मिलेर “साल्माक्
१,६०७ पटक पढिएको
– उपनिर्वाचनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले के सोच बनाइरहेको छ ? अहिले म आफै पनि राजनैतिक रूपमा पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि पाटीको दैनिक गतिविधि तथाक्रियाकलापमा व्यस्त छु । जहाँसम्म उपनिर्वाचनको कुरा छ । २०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा म आफैं प्रत्यासी थिए । हामीले जित हासिल गर्न सकेर्नाँै । त्यस बेलादेखि नै हामीले सक्रिय प्रतिपक्षको भूमिका निवाह गर्दै आएका छौँ । धरानको समग्र विकासमा हामी लागि परिरहेका छौँ । अबको निर्वाचनमा धरानको समग्र विकासका लागि एउटा जिम्मेवार पार्टीलाई जिताउनु पर्छ भन्दै नगरवासीहरूलाई आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्न अपिल गर्दै आएका छौँ । सोही अनुरूप कार्यकर्ताहरू
‘उपमेयर तेरो छ, मेयर मलाई दे ? भन्ने हो भने एकिकरणको औचित्य रहँदैन’
पार्टी एकीकरण पक्रिया शुरु भएको लामो समयपछि धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपाले नगर कमिटी गठन गरेको छ । पूर्व एमाले र माओवादीबीच ६० र ४० को भागवण्डा अनुसार नेकपाको धरान नगर कमिटीमा अध्यक्ष, सचिवसहित १०१ जनाको नगर कमिटी गठन भएको छ । कमिटी गठन भए पनि गठन प्रक्रियाकै विषयलाई लिएर धरानमा नेकपा आन्तरिक विवादमा फँसेको छ । जसको परिणम स्वरूप गठन भएको कमिटीको सपथ ग्रहण पनि हुन सकेको छैन । कमिटी गठनसँगै सपथ ग्रहण हुन नसक्नाले औपचारिक रूपमा नेकपाले कार्यक्रम गर्न सकिरहेको छैन । यतिबेला देशैभरि रिक्त रहेको पदका लागि निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । धरानमा नगरप्रमुख र ७ नम्बर वडामा वडाध्यक्ष गरी दुईवटा
२,६९४ पटक पढिएको
नेमारमाथि बलात्कार आरोपः प्रमाण नपुगेको भन्दै बलात्कार मुद्दा स्थगित
साओ / नेमारले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन् ब्रजिलका चर्चित फुटबल खेलाडी नेमारमाथि लागेको बलात्कार अभियोगको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीहरूले उक्त मुद्दा बन्द भएको बताएका छन्। साओ पाउलोको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाणको अभावमा उक्त मुद्दा निलम्बन गरिएको तर अन्तिम निर्णयको लागि त्यो अभियोजनकर्ताकहाँ पठाइने जनाएको छ। ब्रजिलकी एक मोडल नाजिला त्रिन्दाजीले नेमारले गत मे महिनामा फ्रान्सको प्यारिसस्थित एउटा होटलमा आफूमाथि हातपात गरेको बताएपछि उक्त अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। नेमारले ती महिलाले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आफूबाट पैसा असुल्न खोजिएको दाबी गरेका थिए। घटना के
प्रकाशित मितिः श्रावण १४, २०७६
१,०२३ पटक पढिएको
हङकङमा धेरै धरानेहरूले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । गोर्खा सैनिकको रूपमा सैन्यसेवा देखि, सुरक्षा गार्ड, विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरदेखि, व्यापार व्यावसाय गर्दै आज पनि धेरै धरानेहरू हङकङमा रहँदै आएका छन् । यसरी धेरै धरानेहरू रेहेको हङकङमा धरान र त्यहाँ रहेका धरानेहरूको सामिप्यता र सहयोग बढाउन धरान हङकङ मञ्च स्थापना भएको छ । यो संस्थाको स्थापना कालदेखि नै धरान र हङकङमा रहेका धरानेहरूको सहयोग र सामिप्यता आजमात्रै हैन आउने पिँढीले पनि देख्नसक्ने ज्वलन्त उधाहरणहरू धरानमा प्रशस्त छन् । मञ्चको १० औँ अधिवेशन नजिकिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मञ्चका सचिव नारद राई अध्यक्षका प्रत्यासीका रूपमा आफूलाई अ
प्रकाशित मितिः श्रावण १०, २०७६